MDC-T: Akatshiye Umsebenzi UChombo
Nhlolanja 12, 2014
WASHINGTON DC — Icele le MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai likhuthaza ukuthi umpathintambo wentuthuko yezabelo umnumzana Ignatius Chombo atshiye isikhundla ngoba esehlulekile ukuphatha udaba lokungethembeki olweCorruption kumakhansili elizweni lonke jikelele.
Ophethe isikhundla sokuba ngumpathintambo wentuthuko yezabelo kuMDCT ushadow minister umnumzana Sesil Zvidzai utshele umhlangano lentathelizindaba izolo emahofisini ebandla lakhe eHarvest House ukuthi uChombo kulokuthi ajezise abatholakala belamacala nguye osekhokhela ekuvikeleni iziphathamandla eziziholisa imali ezesabekayo ezinye izisebenzi zamakhansili zihola incosana njalo ingezi ngesikhathi.
Ngeviki edluleyo uChombo ulaye umayor weHarare umnumzana Benard Manyenyeni ukuthi akabuyisele esikhundleni uTown Clerk uTendai Mahachi abe semumise umsebenzi ukuze kuphendlwe indlela yokuthi kucutshungulwe udaba lokuthi iziphathamandla zekhansili okugoqela yena baziholisa imali enengi.
UZvidzai wethesa uChombo umlandu wokungenela ekuqutshweni ngendlela komsebenzi kumakhansili okuyikho okubangela ukuthi omanisiphala behluleke ukusebenzela uzulu. Ngomnyak’ophelileyo uChombo ulaye amakhansili wonke ukuthi esulele izakhamizi izikhwelede ezikade zilazo kiwo ngaphambilini kokhetho. Abanengi bakubone njenge qinga lokukhankasela ukhetho kodwa kufaka amakhansili amanengi enkingeni yokuswela imali yokuqhuba inhlelo zawo.
UZvidzai ukhuthaze uhulumende kamongameli Robert Mugabe ukuthi aphange alandele iziqondiso zesisekelo sombuso esitsha eziphathelane lokuqondisa imisebenzi yamakhansili. Lokhu kugoqela ukubunjwa kwamakhansili ezigaba okuyinto ephikiswe nguMugabe okhethe ukuqhubeka efaka abampathintambo bezabelo ephambana leziqondiso zesisekelo sombuso esitsha.